युनईटेड इर्दि-मर्दीको आइपिओ बाँडफाँडको साइत जुर्यो ! - Arthasansar
सोमबार, १२ माघ २०७७ | Monday, January 25, 2021 IPO Result
Search by company … Chandragiri hills limited Greenlife hydropower ltd. Prabhu life insurance co ltd
युनईटेड इर्दि-मर्दीको आइपिओ बाँडफाँडको साइत जुर्यो !
शनिबार, १३ मंसिर २०७७, ०५ : ५२ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं– युनाईटेड इदी–मर्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेडले निश्कासन गरेको साधारणस सेयर (आइपिओ) बाँडफाँडको मिति तय भएको छ । निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको अनुसार मंसिर १४ गते दिउँसो ४ बजे क्यापिटल कार्यालय जमल, काठमाडौंमा आइपिओ बाँडफाँड हुने भएको हो ।
कम्पनीले मंसिर ३ गते मंसिर ७ गते ८ लाख ७३ हजार ९ सय १० कित्ता साधारण शेयर सेयर निश्कासन गरेको थियो । जसमध्ये ४३ हजार ६९६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि, १७ हजार ४ सय ७८ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ८ लाख १२ हजार ७ सय ३६ कित्ता सर्वसाधारणहरुका लागि निष्कासन गरिएको हो ।
कम्पनीले निश्कासन गरेको सेयरमा ५ लाख ४१ हजार २६३ जना आवेदकले ९४ लाख ९८ हजार ४०० कित्ताको लागि ९४ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँको आवेदेन परेको छ । यसमा लगानीकर्ताले न्युनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाम्रो समुहको जित पक्का छ, चन्द्र ढकालको प्यानल किन?। FNCCI Election। Bodhnath Duwadi
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरम विस्तार
आयोगले विगतका नजिर हेरेर नेकपा भित्रको विवाद चाँडै हल गर्नुपर्छः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव
राजस्व संकलन गर्न एनसिएचएल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र आइएमई पेबीच सम्झौता
सेयर बजारमा रेकर्डको बाढीः आज एकै दिन बने ३ नयाँ रेकर्ड !
गरिमा विकास बैंकद्धारा “स्मार्ट टेलर”को सुरुवात
यी दुई कम्पनीको आइपिओ छुटायो कि पछुतायो ?
नेपाल लाइफको सेयरधनी एक बर्षमै भए मालामाल !
कम्पनीकाे बोनश सेयर तपाईंको खातामा आउन कति समय लाग्छ ?
चन्द्रागिरी हिल्सको आइपिओ बाडफाँड कहिले ?
पैसा जम्मा पार्दै गर्नुहोस्, १३ वटा कम्पनीको आइपिओ बजारमा आउँदै !
सिआस्वा शुल्कमा स्ट्यान्डर्ड बैंकको लुटतन्त्र, कुन बैंकले कति शुल्क लिन्छन् ?
नेप्सेले किन माग्यो एनसीसी बैंकसंग स्पष्टिकरण ?
आइतबार यी १० कम्पनीका लगानीकर्ता मख्खै !
नेप्सेमा हरियाली छाउदा यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाए
नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड, ९ अर्ब माथिको कारोबार
डिस होमको आईपिओ कहिले आउँछ ? यस्तो भन्छ सेबोन
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले आइपिओ निष्काशन गर्ने
हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने अवसर : ग्रीन लाइफ हाइड्रोको आइपिओ माघ २३ गतेदेखि बजारमा आउँदै
नेप्सेले जतततै समस्या सिर्जना गरेकाे छ, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि भनेर साेच्दैछाैं
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनी मालामाल,कारण यस्तो
यो साता सेयर लगानीकर्ता मालामालः एक सातामै कमाए १ खर्ब १९ अर्ब
भ्रमित समाचारको पछि नलाग्न ज्योति विकास बैंकको आग्रह